October 11, 2020 - Online Hartha
” တုတ်နဲ့ ငုတ် “
October 11, 2020 by Online Hartha
” တုတ်နဲ့ ငုတ် ” လူတစ်ယောက်သေလျှင် လက်မနှစ်ခုနှင့် ခြေမနှစ်ခုကိုကြိုးချည်ထားတတ်သည်။ ဘာကြောင့်မှန်းမသိခဲ့ပါ။ ထုံးစံအရလုပ်သည်ဟုသာ နားလည်ထား၏။ ဟိုတုန်းက ဆရာတော်တစ်ပါးဟောကြားသော တရားကိုနာရင်း ဤအကြောင်းကို သိခွင့်ရခဲ့သည်။ ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ နားထောင်ရင်းသဘောကျမိသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အကျိုးရှိနိုင်သည့်အတွက် ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။ တစ်ခါတုန်းက လယ်ပိုင်ရှင်သူဌေးတစ်ယောက်ဆီမှာ အခစားလုပ်သည့် သူရင်းငှားတစ်ယောက်ရှိသည်။ နေ့စဉ်လုပ်နေသော်လည်း ကြီးပွားတိုးတက်ခြင်းမရှိ၍ စိတ်ပျက်နေလေ၏။ တစ်နေ့၌ စဉ်းစားမိ၏။ လယ်ပိုင်ရှင်ထံ လယ်တောင်းမည်။ ကိုယ်ပိုင် လယ်လုပ်ခွင့်ရလျှင် စီးပွားရေး အဆင်ပြေနိုင်သည်။ “သူဌေး သူဌေးမှာ မျက်စိတစ်ဆုံး လက်ညိုးထိုးမလွဲလယ်တွေအများကြီးပါ။ ကျွန်တော့်မှာ လယ်တစ်ကွက်တောင်မရှိဘူး လယ်တစ်ရှင်စာလောက်ပေးပါ။”လယ်တစ်ရှင်စာဆိုတာ နွားနှစ်ကောင်နှင့် တစ်မိုးတွင်း လုပ်ကိုင်လောက်တဲ့မြေကိုပြောတာပါ။သူဌေးက သူရင်းငှားကိုကြည့်ပြီး သနားသွားပါတယ်။ “မင်းလိုချင်သလောက် ငါပေးမယ်။ရော့ ဒီမှာ ငုတ်တစ်ချောင်း ရော့ ဒီမှာ တုတ်တစ်ချောင်း … Read more
အိပ်ယာထဲမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချက်( ၉ )ချက်
အိပ်ယာထဲမှာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အချက် ၉ ချက် မိန်းကလေးတွေ အနေနဲ့ သူတို့နဲ့ အတူအိပ်တဲ့ အမျိုးသားနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ဘာတွေရင်ခုန်တက်ကြတယ် ၊ စိတ်ဝင်တစား ရှိကြတယ်ဆိုတာကို သင်သိပါသလား ? ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး မိန်းကလေးတွေ စိတ်ဝင်စားတဲ့ အရာလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) ရင်ဘက်မွှေး အမျိုးသားတွေရဲ. ရင်ဘက်မှာ အမွှေးအမျှင် ရေးရေးလေး ရှိနေတာမျိုးကို ရင်ခုန်တက်ကြပါတယ် ၊ ထူလပျစ်ကြီးမျိုး မဟုတ်ပဲ သန့်ရှင်းတဲ့ အမွှေးအမျှင်မျိုး ပိုင်ဆိုင်ထားရင်သေချာပေါက် မိန်းကလေးတွေ ကြွေမှာပါ ။ (၂) အမျိုးသားအဂါင်္ကြီးတာကို မနှစ်သက် အမျိုးသား အများစုဟာ သူတို့ရဲ. အမျိုးသားအဂါင်္ကြီးရင် အမျိုးသမီးတွေ နှစ်သက်မယ်လို့ ယူဆထင်မြင်တက်ကြပါတယ် ၊ ဒါဟာ … Read more
ဟင်းရွက်ရောင်းနေတဲ့ အသက်(၈၀) ကျော် အဘွားဆီကို အံ့သြသွားအောင် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဒိန်းဒေါင် ပရိသတ်အချစ်တော် ဟာသ သရုပ်ဆောင် လူရွှင်တောင် ဒိန်းဒေါင်ကတော့ ကိုဗစ်ကာလမှာ ချွန်တွန်း ပရဟိတ အဖွဲ့နဲ့အတူ လှူဒါန်းမှုတွေ ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အပြင် သူပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အိမ်တွေကို ငှားရမ်းနေထိုင်သူတွေအားလုံးကိုလည်းကိုဗစ်ကာလမပြီးမချင်း အခမဲ့နေထိုင်ခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အတွက် ပရိသတ်တွေက လေးစား ဂုဏ်ယူမဆုံးဖြစ်နေကြတာပါ ။ လတ်တလောမှာလည်း ပရိသတ်တွေ ကြည်နူးသွားစေမယ့် အလှူဗီဒီယိုလေး တစ်ခုကို ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးလာခဲ့ပါတယ် ။ ကန်စွန်းရွက်နဲ့ ကန်နဖော့တွေ ခူးပြီး ရောင်းချနေရတဲ့ အသက် (၈၀) ကျော် အဘွားအိုကြီးဆီကနေ ဟင်းရွက်တွေကုန်ဝယ်ပြီး အားပေးခဲ့တဲ့အပြင်နောက်ဈေးထပ်ဈေးမရောင်းတော့ဘဲ အေးအေးဆေးဆေးနေဖို့အတွက် အလှူငွေ တစ်သိန်း ကျပ်တိတိကိုလည်း လှူဒါန်းကုသိုလ်ယူခဲ့ပါသေးတယ် ။ ဒိန်းဒေါင်က အသက်80အမေအိုကြီးရဲ့ကန်နဖော့နဲ့ ကန်စွန်းရွက်ကို ဈေးဆစ်ပြီးပြီးဝယ်လိုက်တယ်ဗျာ … Read more
ခင်ပွန်းခြေရှုပ်နေလို့ဆိုပြီး ဘုန်းကြီးထံအကူညီသွားတောင်းမိတဲ့ အမျိူးသမီးရဲ့အဖြစ် အမျိုးသမီးတစ်ဦးဟာ သူ့ခင်ပွန်းသည် ဖောက်ပြန်နေတာကို သိလိုက်ရပါတယ်။ စိတ်ထိခိုက်ပြီး သူ့ဘဝကို ဘယ်လိုရှေ့ဆက်ရမယ်ဆိုတာ မသိတော့တာကြောင့်တောင်တစ်လုံးပေါ်မှာ သီတင်းသုံးတဲ့ ပညာရှိဘုန်းတော်ကြီးထံကနေ အကြံဉာဏ်ရယူဖို့ ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ လမ်းလျှောက်ခရီး၊ တောင်တက်ခရီးတွေအပါအဝင် ရက်အနည်းငယ်သွားပြီးတဲ့နောက်တောင်ထိပ်မှာ သီတင်းသုံးနေတဲ့ ဘုန်းတော်ကြီးထံ ရောက်သွားပါတယ်။ တပည့်တော်မရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးမှာ သူ့အတွက်ပဲ အချိန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ နုပျိူမှုတွေကိုရင်းပြီးသူ့အနားမှာပဲ နေခဲ့တယ်။ သူ့ကို ဂရုစိုက်ပြီးလည်း ပြု စုခဲ့တယ်။ ခုတော့ သူက တပည့်တော်မထက်ငယ်ရွယ်တဲ့သူကို ရွေးသွားပြီ။ တပည့်တော်မမှာ အခု ဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဘာဆက်လုပ်ရမှန်းလဲ မသိတော့ဘူး”လို့ ဘုန်းတော်ကြီးကို လျှောက်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာပဲ ဘုန်းကြီးက အမျိူးသမီးကို ကွတ်ကီးတစ်ခုစားဖို့ လှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။စားပြီးတဲ့အခါ အမျိုးသမီးကို “အရသာကောင်းလား”လို့ မေးလိုက်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးက “တင်ပါ့.. ကောင်းပါတယ်ဘုရား”လို့ ဖြေတဲ့အခါ “နောက်တစ်ခုယူဦးမလား”လို့မေးလိုက်တဲ့အခါ “ယူပါ့မယ်.. … Read more
အမြင့်ဆုံးအထိ အောင်မြင်ချင်ရင် အသက် ၂၀ အရွယ်မှာ ဒီအကျင့်တွေကို စွန့်လွှတ်လိုက်ပါ..
အောင်မြင်ကျော်ကြားတဲ့ သူတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာ ခါးသီးတဲ့ စည်းကမ်းတွေရှိပါတယ်။ ဖြစ်ချင်တာထက် ဖြစ်သင့်တာကို ဦးစားပေးပြီး ဆန္ဒကို သိက္ခဏာနဲ့ထိန်းသိမ်းတတ်တဲ့သူတွေ၊စိတ်ကူးအိပ်မက်ကြီးကြီးမားမားပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သူတွေဟာ တစ်ချိန်မှာတော့ တကယ့်ကို လျှမ်းလျှမ်းတောက်အောင်မြင်တဲ့သူတွေ ဖြစ်လာပါတော့တယ်။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါရာလိုင်းတွေမှာ အမြင့်ဆုံးသောအောင်မြင်မှုတွေ ရချင်တဲ့သူတွေအတွက် ၂၀ ကျော်အရွယ်ကနေ စတင် ပြုပြင်သင့်တဲ့ အချက်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကြီးမားတဲ့စိတ်ကူးတွေ၊ အိပ်မက်တွေရှိတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် တကယ်ကို ဖတ်သင့်တဲ့ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ပြန်ရှင်းပြ မနေပါနဲ့တော့ သင်ဘာကြောင့် ဒီအရာကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာလဲ၊ ဒီလမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်ခဲ့တာလည်း ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ့်ဘဝအတွက် တကယ်ကို အရေးပါတဲ့သူတွေကလွဲရင် ရှင်းပြမနေပါနဲ့တော့။ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပြီးသား၊ ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးသားအရာတွေအတွက် ငါမှားများမှားသွားပြီလားဆိုတဲ့ သံသယတွေ၊ဒွိဟစိတ်တွေကို ဖျောက်လိုက်ပါ။ (၂) ရည်မှန်းချက်တွေကို အာရုံစိုက်ပါ သင့်ဘဝမှာ မကောင်းတဲ့သူတွေ၊ သင့်ကို စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်စေတဲ့သူတွေကို နှုတ်ဆက်လိုက်ပါတော့။ … Read more
ချောင်းခြောက် တွေဆိုးပြီး အနံ ပျောက်လာလျှင် ဘာလုပ်ရမလဲ
ရန်ကုန်က သမီးတစ်ဦးမေးလို့ပါ။ လည်ချောင်းက ငါးရက်လောက်ရှိပီနာတာ ကြားထဲမှာ တရက်ဖျားတယ် ချောင်းခြောက် နည်းနည်းဆိုးတယ် အခု မနေ့ကထဲက အနံ့က ရတာရ မရတာတွေလဲမရဖြစ်နေလို့ပါ။ ကြက်သွန်နီတွေ လဲဝါးစား ပရုတ်ဆီ နဲ့ရေနွေးငွေ့လဲရှုတယ်မထူးလို့ပါ။ အနံ့ပြန်ရနိုင်မယ့် ဆေးနည်းလေးရှိရင်ပေးပါနော် လောဆယ်တော့ အွန်လိုင်းကနည်းတွေလဲစုံနေပါပီ လုပ်ကြည့်တာ ရုံးကနေ ဘဏ်တွေသွားသွားနေရတော့ နေပူနဲ့ အဲကွန်းကြောင့် ပထမ အပူရှပ်လို့ဘဲထင်ခဲ့တာ ခွင့်ယူထားတာလဲ ပီးခဲ့တဲ့ အပတ်ထဲကပါ။ ဆားတစ်ဇွန်းကို နီအောင်လှော်သံပရာသီးတစ်လုံးအရည်ညှစ်ချ။လျက်ပေးပါ။ သောက်ရင်လည်းရတယ်။ ဆားရည်လည်းမကြာမကြာငုံထွေးပါ။ နလင်ကျော်တုံး သွေးလည်ပင်းလိမ်းပါ။ လျှာအရသာမသ်ိရင် ကြက်ဟင်းခါးရွက်ချေပွတ်ပါ။ အနံ့မရရင် ငြုတ်ကောင်းစေ့ကိုအပ်ဖျားမှာထိုး မီးရှို့ရှူပေးပါ။ပြန်အနံ့ရလာလိမ့်မယ်….. ခရက်ဒစ် Unicode Version ရနျကုနျက သမီးတဈဦးမေးလို့ပါ။ လညျခြောငျးက ငါးရကျလောကျရှိပီနာတာ ကွားထဲမှာ တရကျဖြားတယျ ခြောငျးခွောကျ နညျးနညျးဆိုးတယျ အခု မနကေ့ထဲက … Read more
နေရာတကာ_အယုံမလွယ်မိပါစေနဲ့ တစ်ခါက အိမ်တစ်အိမ်မှာ ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရှိတယ်။နောက်ပြီး ကလေးငယ်နဲ့ အတူတူဆော့ကစားတဲ့ ခွေးလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။ မိဘတွေက နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အလုပ်လုပ်ထွက်ရတယ်။ထိုအခါ ကလေးငယ်ကို အိမ်မှာထားခဲ့ပြီးခွေးကလေးနဲ့အတူတူဆော့ကစားစေတယ်။ တစ်နေ့မှာတော့ ကလေးငယ်နဲ့ ခွေးလေး ပျော်ရွင်မြူးထူးစွာဆော့ကစားနေတာကိုမြွေပွေးတစ်ကောင်က တွေ့သွားတယ်။ မြွေပွေးကလည်း သူ့မှာ အဖော်မဲ့နေတော့ ကစားဖော်လိုချင်လာတယ်။ဒီလိုပဲ မြွေပွေးဟာဆော့ကစားနေတဲ့ ကလေးငယ်နဲ့ခွေးလေးရှိရာသွားပြီး ” ငါလည်း မင်းတို့နဲ့အတူတူဆော့ပါရစေ” လို့ပြောလိုက်တယ်။ကလေးငယ်ကလည်း” ဟင့်အင်း မင်းက မင်းကိုယ်ပေါ်က အကွက်တွေကိုထိရင် ယားပြီး ယင်ကောင်တောင်ပြေးမလွတ်အောင် မင်းရဲ့ အဆိပ်ပြင်းတဲ့ အဆွယ်တဲ့ ပေါက်တတ်တယ် ငါမဆော့ချင်ဘူး” လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ မြွေပွေးဟာလည်း “ငါ့မှာ ကစားစရာ အဖော်မရှိလို့ပါမင်းတို့နဲ့ ငါလည်းဆော့လို့ချင်ပါ မင်းငါ့ကိုယ်ပေါ့ကိုထိလည်း မပေါက်မိအောင် ငါသတိထားပါ့မယ်” ပြန်ပြောလေတယ်။ မြွေပွေးက ကတိအထပ်ထပ်ပေး၍ သနားခံလာတော့ကလေးငယ်ဟာလည်း” ဒီလိုဆို အသင်မြွေပွေး ငါ့ရဲ့ မိဘတွေလာအောင်စောင့်ပါ … Read more
ကမ်ဘာကြျောလက်ခဏာဆရာကွီး ကိုငျရို ဟောကိနျးနဲ့ အနာဂတျမွနျမာပွညျ…
ကမ္ဘာကျော်လက္ခဏာဆရာကြီး ကိုင်ရို ဟောကိန်းနဲ့ အနာဂတ်မြန်မာပြည်… ကမ္ဘာကျော် လက္ခဏာဆရာ ဖြစ်သော ကိုင်ရိုသည် ကမ္ဘာတွင်ဖြစ်ပျက်လာမည့် အရာများကို ကြိုတင်ဟောကိန်း ထုတ်ခဲ့ရာ မှန်ကန်သဖြင့် အလွန်မှပင် ထင်ရှားကျော်ကြားလေသည်။ တစ်နေ့တွင် မစ္စတာကိုင်ရိုထံသို့ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ရောက်ရှိလာလေသည်။ ကိုင်ရိုမှ ခရီးဦးကြိုဆို နေရာထိုင်ခင်းပေးပြီး သံအမတ်ကြီးနှင့် စကားစမည်ပြောလေသည်။ ကိုင်ရိုသည်ကား ကမ္ဘာ့ခေါင်းဆောင် တော်တော်များများနှင့် ကမ္ဘာ့ရေးရာများကို ဟောကိန်းထုတ်ထားရာ မှန်ကန်သဖြင့် နိူင်ငံခေါင်းဆောင်များ၊ဝန်ကြီးများ၊သံအမတ်များ ဖြင့် သိကျွမ်းလေသည်။ သံအမတ်ကြီးလာသောအချိန်သည်ကား ပထမ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးသော အချိန်ဖြစ်လေသည်။ သံအမတ်က ကိုင်ရိုအားမေးလေသည်။ မစ္စတာ ကိုင်ရိုရေ တခုလောက်ကူညီပါ။ ဘာများလဲ သံအမတ်ကြီး ။ အခုက ကြီးမားတဲ့ ကမ္ဘာစစ်ကြီးပြီးဆုံးခဲ့ပြီလေ ။ တို့အမေရိကန်တွေ မဟာမိတ်ဘက်ကဝင်ကူတိုက် လို့ နိဂုံးချုပ်သွားပြီ။ ဒီနောက်ပိုင်း … Read more
မနက်စောစော တစ်ကြောင်းတည်းသာ ရွတ် ဆိုရပြီး ငွေတွေ ဒလဟော ဝင်စေတဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါထာတော်ကြီး
မနက်စောစော တစ်ကြောင်းတည်းသာ ရွတ် ဆိုရပြီး ငွေဒလ ဟောဝင်စေတဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါထာတော်ကြီး မနက်စောစော တစ်ကြောင်းတည်းသာ ရွတ် ဆိုရပြီး ငွေဒလ ဟောဝင်စေတဲ့ လာဘ်နှိုး ဂါထာတော်ကြီး ပရိသတ်ကြီး တို့အတွက်ကောင်းသတင်းလေးတစ်ခုပြောပြချင်ပါတယ် မိမိမှာရှိနေတဲ့ လာဘ်ေ တွ မနိုးဘဲ မပွင့်ဘဲရှိနေရင် လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီးကို ရွတ်ဖတ်ပူဇော်ပေးတာနဲ့ လာဘ်နိုး လာဘ်ပွင့်ပြီး ငွေတွေတလဟော ဝင်ရောက်စေမှာဖြစ်ပါတယ် လာဘ်နှိုးဂါထာတော်ကြီးကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေး လိုက်ပါတယ်… တိုင်းနီးပါး လာဘ်ပွင့် လာဘ်ရွှင်ဂါထာတို့ ငွေဝင်ဂါထာ တို့ပဲ ရွတ်ဆိုနေကြပြီး လာဘ်ကိုနှိုးေ ပးဖို့ မေ့နေတတ်ကြပါ တယ် အဲ့တော့ လာဘ်လာဘ ငွေကြေးတွေက ဝင်သင့်သလောက်မ ဝင်တော့ဘူးပေါ့ အဲ့တာကြောင့် ဒီလာဘ်နှိုးဂါထာလေးကို တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၏ရွတ်ဆို ပုံကေ တာ့မနက် အိပ်ယာထ … Read more
ခဈြသူအပျေါ အရမျးကိုစိတျနှဈပွီး အရူးအမူးခဈြတဲ့သူတှေ ဖွဈတတျတဲ့ ဆိုးကြိုး(၅)ခု…
ချစ်သူအပေါ် အရမ်းကိုစိတ်နှစ်ပြီး အရူးအမူးချစ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆိုးကျိုး(၅)ခု… အခုတစ်ခါမှာတော့ Gleaning ပရိတ်သတ်ကြီးအတွက် ချစ်သူအပေါ် အရမ်းကို စိတ်နှစ်ပြီး အရူးအမူးချစ်တဲ့သူတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဆိုးကျိုး ၅ ခုအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) ပူပင်သောက ရောက်ခြင်း” ကိုယ့်ရဲ့ အချစ်စိတ်တွေ အားလုံးက သူမှ သူဘဲ ဖြစ်နေတဲ့ အခါ သူ့ဘက်က ကိုယ့်ကို ထားသွားမှာ၊ အမှားလုပ်မိမှာ၊ ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာဖောက်မှာ စသဖြင့် အချိန်တိုင်း စိုးရိမ်ပူပန် စိတ်တွေနဲ့ပဲ ဖြတ်သန်းနေရ ပါလိမ့်မယ် …။ ဖြစ်နိုင်ရင် ကိုယ့်အနားမှာဘဲ အချိန်တိုင်း ရှိချင်တဲ့ အတွက် သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အချိန် တွေကို ကိုယ့်ဘက်က ချုပ်ချယ်ကောင်း ချုပ်ချယ် လာမိပါလိမ့်မယ်။ ဒီအခြေအနေတွေ အားလုံးဟာ … Read more